Sei Usinga Zive Kuti Ndini Ani? | Martech Zone
Izvo zvakakosha kuti tienzanise tarisiro yedu yekutengesa kuti tione kuti tiri kuwana chaiyo mutengi. Kana tikasaina vatengi vasiri ivo, isu tinobva tangoziva nekuti kugadzirwa kwedu kunosara, mavhoriyamu emisangano anowedzera, uye kushungurudzika kwakawanda kunowedzera kupinda muhukama. Hatidi izvozvo. Tinoda vatengi vanonzwisisa maitiro edu, vanokoshesa hukama hwedu uye voona mhedzisiro yatiri kuvawana.
Ava masikati ndaifanirwa kugadzira kushevedza kune shamwari uye wandinoshanda naye, Chad Pollitt paKuno Kunzwisisa. Chad ine hukama hwakakura nemutengesi mukuru watiri kutsvaga kutenga kubva kwaari. Nekusvika kweblog redu, kushamwaridzana kwepedyo kwatinako neindasitiri yavo, uye vatengi vakakosha vatinavo ... ndine chokwadi chekuti vatungamiriri mukambani yavo vanozofarira kuita bhizinesi nesu.
Nehurombo, vane nzira yekukwira iyo inoda kuti nditaure nemunhu anotengesa, ndipindure kune akati wandei mibvunzo yekufanirwa, nditaure nemaneja maneja, tarisa mashoma mavhidhiyo anotumirwa nemaneja chiteshi, pindura paspredishiti ine mibvunzo ingangoita makumi mashanu… uye Mwari anoziva zvinotevera.
Havazivi kuti ndini ani here?
Ini handireve kuti mune egocentric jerk mhando yemafungiro. Ini ndakangotendeseka kushushikana kuti ivo chaizvo handizive kuti ndiri ani! Sangano ravo rakura… sezvazvakaita maitiro avo… uye iye zvino vane nhevedzano yevanhu vari mukati mekutengesa kwavo vasina kujairana neindasitiri iyi zvekuti havazive kuti ndine zita rakanaka uye mukurumbira mukati maro. Handitende kuti vakatora nguva yekutarisa, futi. Ini ndinongova imwe nhamba mukutengesa kwavo fanera.
Ndakagumbuka nekuti ndakashanda nesimba kuvaka kuvaka uye nekutevera kukuru kwandinako. Ini handisi Steve Jobs… asi mukati mediki yavo niche yeindasitiri, ndine chokwadi chekuti ndinoratidzira mune yepamusoro makumi maviri nemashanu vanhu vanonzwisisa izvo zvavari kuyedza kuita, kutaura nezvazvo, uye kugovana nezvazvo. Yedu blog ine yakakura kusvika mukati indasitiri yavo, asi vanhu mukutengesa kwavo havazivi.
Uyu muenzaniso wakanaka wekutengesa maitiro akanganisa. Chinhu chekutanga chandinoita kana kambani ikandibata kuti ndiite bhizinesi kuenda kunovatsvaga. Dzimwe nguva tinoita bhizinesi nekuti ivo vanozove vatengi hombe… asi kazhinji isu tinoita bhizinesi nekuti unenge uri mukana wakakura kwatiri!
Ini pamwe handisi kuzadza pepa rekushandisa. Ini ndinomirira kudzamara Chad aona kana vangade kuve vanobatana nemumwe mutungamiriri muindastiri. Zvichava zvinoodza moyo kana vasingadaro kubva pandakagara pane demo ndikaona maturusi andaigona kushandisa kune vedu vatengi… asi kana ivo vangandi bvise ini nenzira makumi mana nenhanho maitiro ekundirega ini pane kunzwisisa zvandiri, ini handina chokwadi chekuti ndoda kuita bhizinesi navo.
Zvese zvinoitwa nebhizinesi hazvifanirwe kukandirwa muchiitiko. Maitiro akakosha kumashini, asi vanhu vanokwanisa kufunga uye vakaita sarudzo dzakashamisa sarudzo dzisingagare dzakakodzera mukuita. Yako tarisiro haisi yekupinda pane pepanhau ... ivo vanhu chaivo. Iwe unofanirwa kuve nemusiyano pane zvese zvaunoita… kubva panguva yakatarwa, kubhajeti, kune zviwanikwa zvinoshandiswa Ndinoda kuti munhu wese ave netariro yangu yakanaka kuti anzwe sekunge ndinonzwisisa zvavari, nei vachikosha, uye kuti tingavabatsira sei.
Uyu mutengesi anofanirawo, zvakare.
Tags: inbound Marketingprequalifyvanokodzera kutungamiraKugonesa Kugonesamaitiro ekutengesa
Bravo: Tora Vhidhiyo Chipupuriro Pamhepo
Apr 27, 2012 pa 8: 14 AM
Bravo Doug! Ndiri mutsva kublog rako uye kusvika parizvino wana ruzivo rwako rwakakosha kwazvo. Ini ndinobvumirana newe, dzimwe nguva mabhoti anoda kuiswa parutivi uye bhizinesi rinoitwa nemapato anoenderana. nguva.
Apr 27, 2012 pa 10: 11 AM
Maitiro akakosha. Inowanzo batsira vese mutengi uye mutengesi. Asi, dzimwe nguva inoda kuiswa padivi mukufarira dialog. Chikamu chakakosha chekutengesa kuziva nguva yekutsauka kubva muchiitiko uye kungotaura nevanhu.
Uye vakabvuma kuti 'kutsvagisa kwakakosha'. Gara uchiziva wauri kutaura naye.
Kutenda nemhinduro, Douglas. Ndichaisa mhinduro yako mukuita.
Apr 28, 2012 pa 3: 47 AM
Kekutanga nguva pano uye ndafara kuziva nezvako pano. Zvese zvawakanyora pano zvinoita sekukoka
uye inodzidzisa. Ndinoramba ndichidzoka kuno.
Jun 25, 2012 pa 1: 03 PM
Kunyangwe iwe urikureva nezve kukura kwebhizinesi kana iyo chete iyo
kumisikidza tekinoroji nyowani, chero imwe iine kukanganisa kwehunhu uye
kusimbisa hukama hwemunhu-ne-munhu. Uye ndezvechokwadi kushambadziro
Executive kubatsirwa kutsvaga nzira yekusimbisa munhu-kumunhu
hukama, zvisinei nehukuru hwekambani uye mhando yetekinoroji iye kana
Munzvimbo yangu yemasevhisi ehunyanzvi, kana ndikasaita
hukama nemutengi, kunyangwe ndiri kupa masevhisi kukambani hombe
kana chidiki, ini handisi kuzowana kutengesa kweaya masevhisi. Zviri
zvisingawanzoitika kuti ini ndichangozadza fomu, ndopa remibvunzo, kuita hurukuro
wobva watora chirongwa. Izvo hazviitike mumutsara wangu webasa; zvagara zvakadaro
kuva nezvehukama. Kwandiri, mutengi wese anofanirwa kunzwa kunge iwe uchiziva kuti ndiani
vari. Ndihwo hukama. Uye kana iwe usingakwanise kutsvaga nzira yekugadzira
vatengi vanonzwa vakasarudzika, iwe ucharasikirwa nebhizinesi.